Kedụ ka m ga - esi kwado IMAP maka Gmail Na iPhone, iPad na Kọmputa? Idozi! - Iphone
sistemụ mac na -ewere ohere
esi eweghachi ndetu iphone
iphone 4s ringer anaghị arụ ọrụ
esi ewepu paswọọdụ na iphone
Kedụ ka m ga - esi kwado IMAP maka Gmail Na iPhone, iPad na Kọmputa? Idozi!
Gmail na-eji teknụzụ ọkọlọtọ akpọrọ IMAP (Internet Message Access Protocol) iji zipu ozi na iPhone, iPad, na kọmputa gị. Ọ bụrụ na agbanyụrụ ya, email gị agaghị egosi na ngwaọrụ gị. O nwere ike ịghọ aghụghọ iji gbanye teknụzụ IMAP nke Gmail site na iji iPhone gị, mana ya nwere ike -eme. N'isiokwu a, m ga-egosi gị otu esi enyere IMAP maka Gmail jiri iPhone, iPad, ma obu komputa gi.
zipu dị ka ozi ederede ios 10
Ọ bụrụ na Gmail agaghị eburu iPhone gị ma ọlị, ana m akwado ka ị gụọ isiokwu m akpọ Gini mere Gmail anaghị arụ ọrụ na iPhone m? Nke a bụ ndozi! maka ije zuru ezu banyere otu esi edozi nsogbu ahụ. 'Gbaa mbọ hụ na IMAP kwadoro' bụ usoro # 4 nke isiokwu ahụ.
Ebe Anyị Kwesịrị Ibido
IMAP kwesiri ka eme ihe na weebụsaịtị Gmail. Banye gmail.com na adreesị email gị na paswọọdụ, wee soro ntuziaka maka ngwaọrụ gị. (Ọ dị mfe na desktọọpụ.)
Etu esi enyere Gmail IMAP Iji iPhone gị eme ihe
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone ma ọ bụ iPad, ị nwere ike ịhụ popup na-arịọ gị ka ibudata ngwa. Emela ya - pịa njikọ 'Gaa na saịtị Gmail mobile' na ala ihuenyo ahụ.
Mgbe ị bisịrị ibu email, pịgharịa gaa na ala nke ibe ahụ, chọọ njikọ ndị na-esote 'Lelee Gmail na:', wee pịa Na desktọọpụ . Jikere maka ụfọdụ obere ebipụta na-ebu m-anyị na-fọrọ nke nta ka. Nwere ike tuo ka mbugharị ma ọ bụrụ na nke ahụ na-enyere aka.
Kpatụ Ntọala , pịa mgbata Ebugharị na POP / IMAP , ma gbaa mbọ ka IMAP rụọ ọrụ.
Etu aga - esi kwado Gmail IMAP na komputa gi
Mgbe ịbanye, pịa akara ngosi akara (n'elu email gị n'akụkụ aka nri) wee họrọ Ntọala .
Pịa Ebugharị na POP / IMAP taabụ ma hụ na enyere IMAP.
mophie wireless chaja pad anaghị arụ ọrụ
Gmail IMAP: Kwadoro
Ọ bụrụ na Gmail anaghị adọnye na iPhone ma ọ bụ iPad gị mgbe ịmechara IMAP, lelee edemede m akpọ Gini mere Gmail anaghị arụ ọrụ na iPhone m? Nke a bụ ndozi! maka ije zuru ezu nke otu esi edozi nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ị gbabara n'ụzọ ọ bụla n'ụzọ, hapụ okwu n'okpuru ma aga m enwe obi ụtọ ibinye aka.
Ihe kacha mma, ma cheta na Payette Forward,